Baastada Alfredo oo leh qaybo digaag ah - Recipe | Recipe
Alicia tomero | 23/11/2021 10:00 | Recipes, Cuntada digaaga
Haddii aad jeceshahay baasto, tani waa hab ka duwan oo ka duwan sida loo diyaariyo saxan spaghetti ah oo leh dhadhan dhaqameed iyo Isbaanish. Waxaad ogaan doontaa hab kale oo aad ku diyaariso baasto qurxoon si qoyska oo dhami u jeclaadaan, iyo baastada qaybo digaag la shiilay waxaad jeclaan doontaa natiijada ugu dambeysa ee cuntadan.
Waxaad ogaan kartaa cuntooyin badan oo baasto ah oo aadan naga maqnaan karin spaghetti oo leh boletus.
300 g naas digaag
1 qaado oo bur ah qamadi
250 ml caano dhan oo diirran
100 g oo jiis ah oo jiiska ah, way ka sii xoog badan tahay, dabeecadda badan waxay siin doontaa saxanka
In yar oo dhir cusub ah oo la jarjaray
Waxaan kululeynaa tiro badan biyo cusbo leh. Marka uu bilaabo inuu karkariyo waxaan ku shubi doonaa spaghettis waxaanan uga tagaynaa inay karinayaan daqiiqadaha ay tilmaamayaan. Markay dhammeeyaan waanu daadinaynaa oo dhinac iska dhigi doonaa.
Waan gooynay digaag qaybo ama taquitos yar. Digsiga shiilan waxaanu ku darnaa saliid yar oo saytuun ah waxaanu ku dari doonaa digaagga. Ku dar milix oo u ogolow inay bunni ah. Markay dhammeeyaan ayaan dhinac iska dhignay.
Digsiga shiilan waxaanu ku darnaa jet yar oo ah saliida saytuunka waana tuuri doonaa toonta duqadda ah ganaax. Waxaan u ogolaan doonaa inay brown.
Marka xigta iyo iyada oo aan toontu na dhaafin, waxaan ku darnaa qaado oo ah burka qamadiga oo waxaan ku siin doonaa wareegyo si ay daqiiqdu u karsato dhowr daqiiqo. Waa inay ka saartaa dhadhanka burka ceeriin.
Waan tuurnay caanaha oo si fiican ayaan u walaaqaynaa si a cajiinka dhuuban oo xoogaa qaro weyn. Waxaan hoos u dhignaa kuleylka oo ku darnaa jiiska. Waxaan sii wadi doonaa soo jeedinta si ay si fiican ugu dhex jirto maraqa, waxaan sugi doonaa laba daqiiqo oo kale oo ka saar kuleylka.
Waxaan tuurnay maraqa sare ee spaghetti marka aan saxanka u tagnona qaar baan ku darnaa Buug digaag. Si aad u qurxiso waxaan ku dari karnaa in yar oo la jarjarey dhir cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: warqad dhakhtar » Recipes » Baastada Alfredo oo leh maraqa digaaga
Macaroni iyo chorizo, dubay